Bing (MSN) mpandika teny
Version 0.9.2 – 4 taona ary tsy mandika
Martsa 11, 2013 amin'ny tolotra 3 Comments
Dia nitombo 4 (raha ny marina 5) tulips noho ny tsingerin-taona
Eny, dia mihoatra ny efa-taona hatramin'ny voalohany dikan-Transposh ny WordPress navoaka. Ary tokoa, no tonga tena lavitra.
Transposh no ampiasain'ny toerana an'arivony manerana ny aterineto, ary faly ny ananantsika zavatra maro mpampiasa (ary tsy vitsy ireo faly 🙂 ).
Izany dikan-, 0.9.2, Tsy tena izay antenaina manana ny ankehitriny, rehefa afaka efa-taona ho nanantena izahay fa ny dikan-iray (mety na dia roa) dia efa nisaorana. Fa toa, ny fiainana no zara raha mivoaka rehefa manomana azy ho.
Ny lohatenin'ny lahatsoratra ity raha ny marina dia milaza ny fitondran-tena vaovao ny parser, rehefa nampiasa ny hiatrika ny &nbsp; (izay tokony ho toerana tsy Mafana) raha ny marina dia namaky ny andian-teny roa, izay fa ny mifanohitra tanteraka ny zavatra tokony ho. Koa enga anie izany dia izao raikitra, ary intsony Ho mandika!
Fanovana hafa dia ahitana:
Basic fanohanana ny Woocommerce fidirana
Handresy ny raharaha rehefa Plugins na lohahevitra hafa mahatonga ny process_page mba hatao hoe tsy tonga volana ny
Amboary ny nasty bibikely rehefa niseho ny fandikan-teny iray ihany ao anatin'ny andalana iray mihoatra ny indray mandeha
Bing no nanampy fiteny roa
Amboary ny bibikely dserber disallowing tatitry ny fifantenana teny amin'ny lahatsoratra izay dia manan-kilema translate_on_publish
Vaovao ho an'ny raki-daza .po, Tiorka Translation amin'ny Faruk Omer Khan
Dia hahazo izany dikan-! Izany no didy! 🙂
Nametraka Under: General Messages, Release filazana, Software Updates Tagged Miaraka: Bing (MSN) mpandika teny, andro nahaterahan'i, tsy ampy taona, parser, fanafahana
Version 0.6.4 – Ny mpanao kiraro dia tsy nikiraro
Oktobra 14, 2010 amin'ny tolotra 2 Comments
Matt ary Me
Izany, isika dia tsy misy hafa nanatevin-daharana noho Matt Mullenweg, ny mpamorona ny WordPress sehatra.
Ao amin'ny manaraka fanadihadiana sandoka tanteraka, Matt dia hanampy antsika hahatakatra ny zavatra rehetra dia vaovao amin'ny 0.6.4:
Ofer: Hello Matt, manao ahoana ianao androany?
Matt: Mbola tsy nisy toy izany teboka iray faly 0.01 famoahana ny plugin talohan'ny!
Ofer: Fa nahoana izany?
Matt: Mino aho fa ianao ihany ny fahazoana ny fanahy ny WordPress amin'ny fanafahana ity
Matt: Eny, ianao ihany fampidirana ny sehatra fa tsy ny fanapahana manodidina azy, Tena toy ny hoe ianao naka ny fotoana farany, ary nanao ny plugin interface tsara sy ny fitantanana pejy translatable, ary satria ianao fa tsara, ianao hahazo bilaogy malalaka!
Ofer: Omeo, misaotra! ankehitriny, ahoana no mahazo ny olona hafa hanao ny fandikan-teny plugin?
Matt: Mangataka fotsiny ny mpampiasa ny hanao izany, Mino aho fa ianao omeo voninahitra.
Ofer: Lazao azy ireo ny zavatra rehetra momba ny poedit sy ny zavatra?
Matt: Eo moa, toy ny foana aho hoe:, misy plugin ho izany! Ary tokony Mety mahafantatra satria nandika azy io ny tenanao ianao, ary nandray anjara tsy ampy taona ny sasany fixes.
Ofer: Ny tianao hambara codestyling-toerana?
Matt: Eny, izany ny iray, na iza na iza dia afaka mampiasa azy. Fa Izaho kosa manana fanontaniana ho anao
Ofer: Ho ahy?
Matt: Eny, Nahoana no tsy mampiasa Transposh noho ny manao izany?
Ofer: Tsy tena mahita ny antony, toy ny efa misy plugin lehibe ho azy, nahoana vitantsika ny maka tahaka?
Matt: Hitako fa ianao nahazo izany farany.
Ofer: Fahazoana izay?
Matt: Ny fanahin 'ny WordPress, fizarana, fiahiana, loharano misokatra, ary maimaim-poana ny fitiavana.
Ofer: Fanantenana azo antoka izany aho, misaotra betsaka anao noho ny aminay.
Matt: Misaotra anao, amin'ny manaraka, azafady dinidinika ahy amin'ny endri-javatra lehibe, Raha tsy maintsy manao hosoka ny dinidinika ho an'ny tsy ampy taona rehetra plugin fanafahana amin'ny WordPress, Na oviana na oviana aho manana fotoana malalaka mba tena hanatsara ny WordPress, ary tonga wordcamps.
Ofer: Dia handray an-tsoratra, mamerina ny fisaorana anao!
Tsara, Misaotra noho ny fidirana antsika Matt, koa ny lafin-javatra sasany koa io no dikan-teny latinina koa (amin'ny fandikan-teny ny google fanohanana), fiteny vaovao telo koa ny Bing handika. Ny fahafahana mankarary ny gettext fidirana izay miteraka olana, amin'ny fixes hafa.
Toy ny mahazatra – Manantena izahay fa hahazo izany dikan-
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: Bing (MSN) mpandika teny, sandoka tafa sy dinika, gettext, dikanteny google, Matt mullenweg, tsy ampy taona, fiteny maro, fanafahana
Septambra 1, 2010 amin'ny tolotra 14 Comments
GetText mahatonga ny fandikan-teny mora kokoa
Version vaovao io fiovana lehibe roa sy ny maro ny bibikely fixes tafiditra.
Fanovana manan-danja indrindra dia ny fampidirana ny plugin amin'ny WordPress rafitra GetText, dia ny lalana WordPress (ary ny sasany lohahevitra sy ny Plugins) manome dika voafaritra tena. Izany dia atao amin'ny roa rakitra (antsoina hoe .po / .mo raki-noho ny fanitarana) izay ahitana ny lisitr'ireo voadika rindrambaiko tady izay izany dia ahitana.
Inona no Transposh izao no dia ny hampiasa hoe rakitra, ka raha manana ny antontan-taratasy izay handika WordPress amin'ny teny espaniola, izy ireo dia handray tiana sy Transposh hampiasa ny antontan-taratasy mba hanao ny fandikana ny interface tsara ho espaniola. Nahoana no tsara kokoa? misy antony vitsivitsy, Ny iray dia hoe indraindray manampy ireo fandikan-teny teo aloha izay tsy azo, iray hafa dia ny fandikan-teny dia olombelona, ​​ary heverina kokoa ara marina, ary ny farany dia mety hanala ambiguity fohy indrindra ao amin'ny tady toy ny volana sy ny andro anarana fanafohezan-teny.
Ny fomba hahazoana ny .po / .mo rakitra, ary fanazavana fanampiny momba ny fomba izany asa izany dia ho hita ao amin'ny http://trac.transposh.org/wiki/UsingGetText.
Endri-javatra izany koa ny ny Avereno soratana ny in-fahatsiarovana tontolo caching ny plugin, izay ankehitriny manohana xcache ary eaccelarator ankoatry ny teo aloha dikan- APC fanohanana. Ity dia mampiasa dikan-voalamina tsara kokoa ny angon-drakitra solontena izay fampisehoana kokoa sy mampihena ny fampiasana ny fahatsiarovana.
More fixes ao amin'io dikan-:
Tags avy amin'ny rahona ny tenifototra dia izao nadika amin'ny faobe mandika
Amboary ny sneaky “tsy manan-kery plugin lohapejy” olana, raha toa ianao mametraka “toerana misy anao” miverina indroa ao anaty filatron-dahatsoratra fifantenana ny toe-javatra, azafady mamafa ny Widgets / tpw_deafult.php rakitra
Amboary ny MS nandika fironana manampy fanampiny toerana ny fandikan-teny vokatry
Raikitra bibikely amin'ny lisitry ny saina CSS anaty filatron-dahatsoratra manakana ny fomba fijery ny saina
Efa niova ihany koa ny toerana ity fisehon kely mba hahafahanao mahita ny fampandrosoana sy ny fiovana fahana amin'ny fotoana tena kokoa lamaody.
Miandry ny feedbacks izany dikan-.
Update: Nisy bibikely hita rehefa mampiasa ny plugin tsy caching, raha manana fandikan-teny Averimbereno, na ianao Kana € ™ ny mahita teny natao tany aloha,, azafady reinstall ny plugin avy wordpress.org, ny plugin misy ankehitriny raikitra. Misaotra Nicholas ny tatitra izany.
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: APC, Bing (MSN) mpandika teny, bugfix, eaccelarator, gettext, tsy ampy taona, fanafahana, WordPress plugin, xcache